Ama-nonograms / ama-griddler aku-inthanethi
Umdlalo uzobona ngokuzenzakalela lapho usufinyelele isisombululo sephazili yamanje.
Gqamisa izincazelo zesikwele samanje: yebo cha
Lungisa izilayida ukumisa usayizi webhodi oyifunayo:
Qala umdlalo omusha Dlala okokufundisa
[5x5] [5x10] [10x10] [15x15] [20x20] [25x25] [usayizi ngokwezifiso] [imidwebo]
Ama-nonograms - Imithetho
Inhloso yalo mdlalo ukuthola ibhodi elenziwe ngezikwele eziluhlaza nezikhala zamahhala. Ungakwenza lokhu ngokubheka izincazelo zomugqa / zekholomu: ukulandelana kwezinombolo ezichaza amaqembu ezikwele ezilandelanayo avela kulowo mugqa / ikholomu. Isibonelo, u-1 5 2 usho isikwele esisodwa, izikwele ezi-5 nezikwele ezi-2, ngale ndlela, zihlukaniswe ngesikhala esisodwa noma ngaphezulu phakathi kwazo.
Ungachofoza izikwele kanye ukuze uzimake njengezithathiwe. Ukuwachofoza futhi kuzowamaka ngo-X; ungasebenzisa lolu phawu ukulandelela izikwele ocabanga ukuthi azinalutho. Ukuwachofoza futhi kuletha izikwele esimweni sazo sokuqala.
Ama-nonograms ayaziwa ngaphansi kwamanye amagama amaningi, kufaka phakathi i-Paint ngezinombolo, i-Crucipixel, i-Edel, i-FigurePic, i-Grafilogika, i-Griddlers, i-Hanjie, i-Illust-Logic, ama-Japanese Crosswords, ama-Japanese Puzzles, i-Kare Karala!, I-Logic Art, i-Logic Square, i-Logicolor, i-Logik- Ama-Puzzles, i-Logimage, i-Oekaki-Mate, i-Paint Logic, i-Pic-a-Pix, i-Picross, i-Pixel Puzzles, i-Shchor Uftor ne-Tsunami.
Eminye imidlalo eku-inthanethi
Zama eminye imidlalo ye-Imidlalo.com, ehlelwe ukuthandwa kwayo:
Thola izithombe ezifihliwe ngokuya ngemikhondo enamadijithi.
Gcwalisa ibhodi ngokuhlonipha ukungalingani.
Susa amaqembu wamabhola ngokulandelana.
Gcwalisa ngamadijithi ibhodi le-9x9, ngemikhawulo.
5. Ibhola Bhalobhasha
Yenza amaqembu amabhola ama-3 kuze kuphele isikhathi.